Sidee Cannabis uga caawin karaa dhibaatooyinka Tinnitus, Tinnitus. • Dawooyinka Inc.eu
Waxay horeyba ugu egtahay dad badan oo yaqaan: tinnitus, ama dhagaha dhegaha.
1 Fahmitaanka tinnitus
2 Maxaa Sababa Tinnitus?
3 Ma jiraan wax astaamo ah?
4 Sidee xashiishku gacan uga geysan karaa ka takhalusidda dhibaatada tinnitus?
4.1 Xashiishku wuxuu daaweeyaa xanuunka
4.2 Xashiishku wuxuu ka caawiyaa walaaca iyo xanaaqa
4.3 Xashiishku wuxuu caawiyaa hurdo la’aanta
4.4 Xashiishku wuxuu hagaajiyaa isku-uruurinta
4.5 Xashiishku wuxuu hagaajiyaa wareegga dhiigga
Cannabis wuxuu helay aqoonsi ballaaran sanadihii la soo dhaafay sababtoo ah waxyaabo badan oo daaweyn ah. In kasta oo xashiishku inta badan caan ka noqday horaantii qarnigii 20aad, dhirtu waxay leedahay taariikh dheer oo bini aadamku isticmaalo.
kala duwan Raadinta qadiimiga ah muujiyaan isticmaalka xashiishadda Bartamaha iyo Koonfur-bari Aasiya horraantii 2500 sano ka hor. Waqtigaas, soosaarida geedka waxaa badanaa loo adeegsaday warshadaha dharka. Ma ogtahay in erayga 'canvas' uu xiriir la leeyahay xashiishka? Taasi waxay kaliya muujineysaa sida ay muhiim ugu tahay warshad warshad warshadaha dharka.
In kasta oo xashiishku wali yahay shey muhiim u ah warshadaha dharka, haddana waxyaabaha laga soo saaro ayaa sida ugu wanaagsan loogu yaqaanaa saameyntooda daaweynta. Waxaa jira liis dheer oo xaalado caafimaad ah oo aad ku daweyn karto xashiishadda, oo ay ku jiraan xanuunka, walwalka, suuxdinta, hurdo la’aanta iyo cilladaha neerfaha. Dhawaan, tinnitus sidoo kale waxay ku biirtay liiska xaaladaha caafimaad ee geedo yaryar ka caawin karaan.
Cannabis wuxuu caawiyaa baabi'inta dhibaatooyinka tinnitus (afb)
Laakiin sidee xashiishku uga caawin karaa ka takhalusida dhibaatada tinnitus? Akhriso si aad u ogaato.
Tinnitus waxaa loola jeedaa aragtida dhawaaqa ama maqalka dhagahaaga, xitaa marka uusan jirin dhawaq muuqda oo dibadda ah. Ma aha xaalad caafimaad oo gaar ah, laakiin waa astaamaha cudur kale. Si kastaba ha noqotee, tinnitus waa dhibaato guud, illaa iyo ilaa 50 milyan oo Mareykan ah nooc ka mid ah xaaladda. In kasta oo aysan guud ahaan ahayn mid dhib badan, tinnitusku wuxuu noqon karaa mid dhib badan oo xitaa ka sii daraya xaaladaha caafimaad qaarkood, sida walaaca iyo hurdo la'aanta.
Tinnitus wuxuu u qaybsan yahay tinnitus shaqsiyeed iyo ujeeddo leh. Mawduuca tinnitus waa codka aad maqli karto waana nooca ugu caansan ee tinnitus. Dhinaca kale, tinnitus ujeedadu waa dhawaqa dhakhtarku maqli karo markuu ku baarayo.
Maxaa Sababa Tinnitus?
Tinnitus wuxuu ku badan yahay dadka da'da ah. Haddii aan la daaweyn, waxay noqon kartaa walaac murugsan markii aad sii gabowdid oo aad noqotid mid ka mid ah sababaha aasaasiga u ah luminta maqalka ee la xiriira da'da.
Da'da ka sokow, tinnitus sidoo kale waxaa sababi kara cudur kale ama dhaawac, gaar ahaan xaalad saameysa madaxa, dhegta, habka neerfaha ee dhexe, ama wareegga dhiigga.
Sababaha kale waxaa ka mid ah:
Isku dhejinta lafaha dhexda
U-soo-gaadhista sawaxanka weyn
Murqaha murqaha ee gudaha dhegta gudaha
Ciladaha isku-dhafan ee isku-dhafan (TMJ)
Ciladda tuubada 'Eustachian'
Dhibaatooyinka wadnaha iyo xididada dhiig karka sida dhiig karka iyo atherosclerosis
Ma jiraan wax astaamo ah?
Sidii aan horeyba u soo xusnay, astaamaha ugu caansan ee tinnitus waa dareenka maqalka ee dhagahaaga oo aan lahayn sawaxan banaanka ka muuqda. Dhawaaqu wuxuu noqon karaa giraan, buuq, guux, ciyey, ciinid ama gujin.
Heerka tinnitus waxay kuxirantahay nooca iyo darnaanta sababta. Waxay u dhexeyn kartaa guux fudud oo loo dulqaadan karo ilaa duufaan duurjoog ah oo si weyn u carqaladeeya awoodaada inaad feejignaato. Dhawaqyadaasi waxay saameyn ku yeelan karaan hal ama labada dhegood waxayna u dhici karaan si isdaba joog ah ama joogto ah.
Sidee xashiishku gacan uga geysan karaa ka takhalusidda dhibaatada tinnitus?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in tinnitus uusan hadda daawo lahayn.
Dhammaan xulashooyinka daaweynta, sida xashiishka, waxay wax ka qabtaan astaamaha iyo kicinta xaaladda. Iskusoo wada duuboo, xusuusnow in xashiishadda cannabis ay ka shaqeyn karto oo keliya tinnitus haddii aad alaabada ka iibsato alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoon yahay sida abuurka xashiishadda Canada. Taasi waxay ka dhigan tahay in la hubiyo in badeecada la soo saaray iyadoo la adeegsanayo habab lagu taliyay iyo inay jiraan warbixinno sheybaar saddexaad.
Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha xashiishku uga caawin karo tinnitus;
Xashiishku wuxuu daaweeyaa xanuunka
Xanuunku waa mid ka mid ah xaaladaha ugu muhiimsan ee aad ku daweyn karto xashiishka. Sidoo kale waa sababaha ugu badan ee tinnitus. Xanuun uu keeno tinnitus wuxuu noqon karaa mid nociceptive ah (dhaawac jireed oo madaxa ka soo gaara) ama neuropathic (sababtoo ah dhaawaca neerfaha, gaar ahaan neerfaha ku xeeran nidaamka dhexe ee neerfaha).
Cannabis wuxuu xanuunka ku daaweeyaa iyadoo la hagaajinayo habka calaamadaha xanuunka ee nidaamkaaga endocannabinoid. Markaad isticmaasho shey ay kujiraan xashiishad, iskudhafyada sheyga waxay galaan nidaamkaaga endocannabinoid waxayna kuu fududeeyaan waxtarka aad kudhexeyso cannabinoids ku xidh xidhayaashaada endocannabinoid. Natiijadu waa xanuun joojiye dhakhso leh, oo yareeya dareenka tinnitus.
Xashiishku wuxuu ka caawiyaa walaaca iyo xanaaqa
Bux-jeexan ama buuq joogto ah ee dhagahaaga ayay u badan tahay inay kaa welwelaan. Hadana haddii aan la daaweyn, waxa u muuqda mid fudfudud iyo walwal daqiiqad ah wuxuu isu beddeli karaa xaalad nafta halis gelisa. Nasiib wanaagse, xashiishku wuxuu kaa caawin karaa yareynta welwelka tinnitus-ku soo kordha.
Dhalooyinka quraaradaha leh ee kuleylaha xashiishka la qalajiyey (afb)
Cilmi baaris waxay muujineysaa in qadar yar oo walxaha nafsaaniga ah ee xashiishka, tetrahydrocannabinol (THC), wuu yareyn karaa welwelka. Xashiishadda xashiishka aan cilmi-nafsiga ahayn sida cannabidiol (CBD) waxay kaloo muujiyeen saamayn togan oo ka dhan ah xanuunada walwalka sida jahwareerka bulshada.
Xashiishku wuxuu caawiyaa hurdo la’aanta
Tinnitus wuxuu keenaa walaac, welwelkuna waa mid ka mid ah sababaha keena hurdo la’aanta. Xashiishada darteed ayaa kugu jirta caafimaadkaIyo nidaamka fayoobaanta, waad ka takhalusi kartaa astaamaha hurdo la’aanta oo aad seexan kartaa habeen wanaagsan.
Xashiishku wuxuu siyaabo kala duwan ugu daaweeyaa hurdo la’aanta. Qiyaasta sare, THC waxay u shaqeysaa sida dajin, kaa caawineysa inay ku dejiso oo ay soo gaabiyo daahitaankaaga hurdo. CBD sidoo kale waxay door ka ciyaareysaa yareynta daahitaanka hurdada. Intaas waxaa sii dheer, CBD waxay daaweysaa hurdo la'aan iyadoo baabi'ineysa hurdo REM (Dhaqdhaqaaq Dhaqso leh). Maaddaama riyadaha badankood ay dhacaan inta lagu jiro hurdada REM, baabi'inta wejigan hurdada waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof aan riyoon oo hurdo badan.
Ugu dambeyntiina, soosaarida xashiishka waxay gacan ka geysaneysaa kahortagga qaar ka mid ah astaamaha ugu daran ee hurdo la'aanta sida cilladda murugada ka dib Cilladaha dabeecadda hurdada.
Xashiishku wuxuu hagaajiyaa isku-uruurinta
Xashiishku wuxuu kaloo gacan ka geysan karaa hagaajinta diiraddaada iyo u fiirsashadaada, taas oo ah saameyn kale oo muhiim ah oo aan fiicnayn oo tinnitus ah: hoos u dhaca ku-fiirsashada. In kasta oo cilmi-baaris ku saabsan aaggan ay wali socoto, natiijooyinka aan ilaa hadda hayno ayaa durba ku qasbay.
THC iyo dhowr jeer oo muhiim ah cannabis terpenoids sida "pinene" ayaa lagu xusay awooddooda si loo wanaajiyo xirfadaha diiradda iyo garashada.
Xashiishku wuxuu hagaajiyaa wareegga dhiigga
Dhibaatooyinka wadnaha iyo xididdada dhiig karka sida dhiig karka ayaa ah sababaha kale ee caanka ah ee tinnitus. Nasiib wanaagse, xashiishka waxaa loo yaqaanaa awooddiisa hoos u dhigidda dhiig karka. Waxyaabaha laga soo saaro geedka, sida CBD, waxay u dhaqmaan sidii vasodilatore.
Cannabis iyo CBD waxay hagaajinayaan wareegga dhiigga, sidoo kale waxay faa'iido u leeyihiin daaweynta dhibaatooyinka tinnitus (afb)
Kaaliye ahaan, CBD waxay sababtaa ballaarinta xididdada dhiigga, iyadoo laga takhalusiyo culeysyada sababi kara haddii kale wadnaha inuu boodboodo si aan loo baahnayn dhakhso. Taasi waxay sharraxaysaa sababta ay xashiishku u tahay daawo dabiici ah oo caan ku ah adkeysiga galmada liidata.
Waxaa jira siyaabo badan oo xashiishadda ay gacan uga geysan karto maaraynta tinnitus. Ha ilaawin inaad ka iibsatid alaabadaada ku saleysan xashiishka ganacsato idman. Kadib kubiloow dhabarka gubiyaha oo si tartiib tartiib ah u kordhi qiyaastaada qiyaaso yar. Iyo guud ahaan la tasho dhakhtar ka hor inta aanad ku darin geedka qaab nololeedkaaga.
Caasimada Australia ee Canberra waxay noqoneysaa magaaladii ugu horeysay ee wadanka sharciyeeysa marijuana kadib ...